हरारीकाे लेख : कोभिड वर्षले हामीलाई के सिकायो ?
- युभल नोह हरारी
इतिहासको फराकिलो कडीमा कोभिडग्रस्त एक वर्षको मूल्याङ्कन कसरी होला ? धेरै मानिस कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको ठूलो संख्या हेरेर भनिरहेका छन्- प्रकृतिको सामर्थ्यअघि मान्छेको केही जोर चल्दैन ।
सन् २०२० ले हामीलाई देखाएको वास्तिकता भने ठीक उल्टो छ- प्रकृतिको अगाडि अब मानिस निरीह छैन । अब महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिरको प्राकृतिक शक्ति रहेन । विज्ञानले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने चुनाैतीमा बदलिदिएकाे छ ।
त्यसो भए यो एक वर्षमा यति धेरै मृत्यु र पीडा किन त ? राजनीतिक नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण ।
पुरानो युगमा ‘ब्ल्याक डेथ’ जस्तो महामारीको सामना गरेका मानिसहरूलाई यसको कारण के हाे र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने थाहै थिएन । सन् १९१८ मा जब इन्फ्लुएन्जाकाे महामारी फैलियाे, संसारका सबैभन्दा राम्रा वैज्ञानिकले पनि त्यो भाइरस पत्ता लगाउन सकेनन् । त्यसको रोकथामका लागि ल्याइएका उपायहरू प्रभावहीन भए । इन्फ्लुएन्जाप्रतिरोधी खोप विकास गर्ने प्रयास पनि व्यर्थ भयो ।
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा सबै कुरा फरक छन् । सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्त्यतिर नयाँ महामारी सुरु भएको संकेत मिल्यो । सन् २०२० जनवरी १० मा वैज्ञानिकहरूले भाइरसको प्रवृत्तिबारे थाहा मात्रै पाएनन्, यसको जिनोम अनुक्रमसम्बन्धी जानकारी अनलाइनमा प्रकाशितसमेत गरे ।
केही महिनाभित्रै कुन उपायले भाइरस फैलनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने समेत प्रष्ट भयो । एक वर्षभन्दा कम अवधिमा प्रभावकारी भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु भयो । जिवाणु र मानिसबीचको युद्धमा मानिस यति शक्तिशाली कहिल्यै देखिएको थिएन ।
जैविक-प्रविधिको अभूतपूर्व उपलब्धिसँगै यो कोभिड वर्षले सूचना प्रविधिको शक्तिसमेत यो वर्ष थप उजागर गर्‍यो । पहिले-पहिले मानिसले महामारीलाई यसरी नियन्त्रणमा लिन सक्दैनथे । किनभने, ‘रियल टाइम’मा संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने निगरानी गर्न मुस्किल थियाे । व्यापक आर्थिक क्षतिका कारण लामो लकडाउन व्यहोर्न उनीहरू समर्थ थिएनन्। सन् १९१८ मा खतरनाक हैजाको लक्षण भएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न त सकिन्थ्यो तर लक्षण देखिन सुरु नभएका वा लक्षणै नभएका मानिस त्यसअघि कता-कता गए, क-कसको सम्पर्कमा पुगे भन्ने थाहा पाउन कठिन थियो । सम्पूर्ण जनसंख्यालाई हप्तौँसम्म घरभित्रै बस्न कडा आदेश दिने हो भने अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने थियो । त्यहाँ समाजिक समस्यासँगै भोकमरीको समस्याले सताउने थियो ।
ठीक विपरीत सन् २०२० मा ‘डिजिटल’ निगरानीले भाइरसवाहक पत्ता लगाउन र निगरानी राख्न सजिलो भएको छ । जसले गर्दा क्वारेन्टाइनमा कसलाई राख्ने भनेर छनोट गर्न सजिलो भयो र क्वारेन्टाइन अझै प्रभावकारी हुन पुग्यो । अझै महत्त्वपूर्ण त, कम्तीमा विकसित मुलुकमै भए पनि ‘अटोमेसन’ र इन्टरनेटका कारण लकडाउन धान्न सकिने भयो । कतिपय विकासशील मुलुकको कोभिड अनुभव विगतका महामारी सम्झाउने खालको भयो । विकसित मुलुकमा भने डिजिटल क्रान्तिले सबै कुरा परिवर्तन गरिदियो ।
कृषिलाई नै हेरौँ । हजारौँ वर्षसम्म कृषि उत्पादन मानव श्रममा निर्भर थियो । लगभग ९० प्रतिशत मानिस कृषि क्षेत्रमै काम गर्थे। आज विकसित मुलुकको अवस्था यस्तो छैन । अमेरिकामा १.५ प्रतिशत मानिस मात्रै कृषिमा काम गर्छन् । यो सानो संख्याले मुलुकभित्र मात्रै पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गरिरहेको छैन, अमेरिकालाई विश्वकै प्रमुख कृषिउपज निर्यातक पनि बनाएको छ । अधिकांश कृषिकर्म मेसिनको सहायतामा हुन्छ, जसलाई रोगले कुनै प्रभाव पार्दैन । त्यसैकारण, कृषिमा लकडाउनको प्रभाव न्युन रहयो ।
‘ब्ल्याक डेथ’ उत्कर्षमा रहेको बेलाको गहुँ खेत सम्झिनुस् । बाली भित्र्याउने बेला किसानहरूलाई घरभित्रै बस भन्ने हो भने भोकमरी सुरु हुन्छ । तर, किसानलाई बाली भित्र्याउन आह्वान गर्ने हो भने खेतबाटै संक्रमण फैलन थाल्छ । गर्ने के त ?
सन् २०२० मा त्यही गहुँ खेत सम्झिनुहोस् । जीपीएस जडित एउटै मेसिनले पुरै खेतमा गहुँ काट्ने काम गर्न सक्छ । यो काम मानव श्रमबाट गरिनेभन्दा प्रभावकारी त हुन्छ नै, संकम्रण फैलने खतरा पनि हुँदैन ।
सन् १३४९ मा एक जना मजदुरले दिनभरिमा लगभग पाँच डोको गहुँ काट्न सक्थ्यो भने २०१४ मा एउटा मेसिनले ३० हजार डोकोबराबर गहुँबाली भित्र्याएको रेकर्ड राख्यो । त्यसैकारण कोभिड-१९ ले गहुँ, मकै र धानजस्ता प्रमुख बालीको उत्पादनमा खासै असर पारेन ।
मानिसहरूलाई खुवाउनका अन्नको फसल लगाएर मात्रै हुँदैन । यसलाई ढुवानी पनि गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही हजारौँ किलोमिटर ढुवानी गरेर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । इतिहासको अधिकांश कालखण्डमा, महामारीको कथामा व्यापार खलनायकका रूपमा देखिन्छ । डरलाग्दा जिवाणुहरू व्यापारीका सामान बोकेका पानीहजाज र लामो दूरीको यात्रा गर्ने व्यापारीका क्याराभानसँगै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको यात्रा गर्छन् ।
उदाहरणका लागि ‘ब्ल्याक डेथ’ रेशम मार्गको बाटो हुँदै पूर्वी एसियाबाट पश्चिम एसिया पुगेको थियो । इटालीको जेनोआ शहरका व्यापारीको जहाजले यसलाई पश्चिम एसियाबाट युरोप पुर्‍यायो । व्यापारले यस्तो खतरा सिर्जना गर्नुको कारण ढुवानीको पुरातन पद्धति थियो । प्रत्येक ठेला धकेल्न एक-एक जना मजदुर चाहिन्थ्यो । समुद्रमा चल्ने सानो जहाज चलाउन पनि दर्जनौँ चालक चाहिन्थ्यो । भीडभाड युक्त जहाजहरू संक्रमण प्रसारका प्रमुख कारक हुन्थे ।
सन् २०२० मा वैश्विक व्यापार प्राय: सामान्य रूपमा नै चलिरह्यो । किनभने, यहाँ मानिसकाे संलग्नता न्यूनतम हुन्छ । आधुनिकताको प्रारम्भिककालीन सानो जहाजले भन्दा अहिलेको स्वचालित पानीजहाजले धेरै टन सामान ढुवानी गर्नसक्छ ।
सन् १५८२ मा अंग्रेज व्यापारीका जहाजको कुल ढुवानी क्षमता ६८ हजार टन थियो र यसका लागि १६ हजार चालक आवश्यक पर्थ्यो । सन् २०१७ मा बनेको ओओसीएल हङकङ नामक कन्टेनर पानीजहाज एक्लैले दुई लाख टन सामान बोक्न सक्छ । यो जहाजको चालक दलमा २२ जना मात्रै छन् ।
हो, सयौँ पर्यटक बोकेका यात्रुवाहक पानीजहाज र यात्रीले भरिएका हवाइजहाजले कोभिड-१९ फैलाउन प्रमुख भूमिका खेले । तर, पर्यटन र यात्रा व्यापारका लागि अत्यावश्यक छैनन् । महामारीको बेला एउटा पर्यटक घरमै बस्न सक्छ । व्यापारीहरूले जूममा कुरा गर्न सक्छन् । स्वचालित पानी जहाज र लगभग मानवरहित रेलले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न सक्छन् । सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन पुरै तहसनहस भयो तर समुद्री मार्गको व्यापारमा चार प्रतिशतले मात्रै गिरावट आयो ।
सेवा क्षेत्रमा ‘अटोमेसन’ र ‘डिजिटलाइजेसन’को अझ महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्‍यो । सन् १८१८ मा कार्यालय, स्कुल, अदालत वा मन्दिरहरू लकडाउनका वाबजुद पनि सञ्चालन गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर थियो । शिक्षक र विद्यार्थी दुवै घरमै थुनिएपछि कसरी पढाइ हुनसक्छ ? आज हामी जवाफ दिन सक्छौँ । अनलाइनमा रुपान्तरण हुँदाका धेरै बेफाइदा छन् । यसले मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ । यसअघि हामीले कल्पना नगरेका समस्याहरू पनि सिर्जना गरेको छ । जस्ताे कि, अदालतमा बहस गर्न गएको वकिल बिरालोको रूपमा देखिनु । तर, यी कुराहरूलाई अझ धेरै राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
सन् १९१८ मा डरलाग्दो हैजाले यो संसारमा आतंक मच्चाउँदा मानवता भौतिक संसारमा सीमित थियो । भौतिक संसारबाहिर अर्को कुनै स्पेस थिएन । आज हामी अधिकांश दुई वटा संसारमा बाँच्छौँ, भौतिक र भर्चुअल । जब भौतिक संसारमा कोरोना भाइरस फैलिन थाल्यो, धेरै मानिसहरूले जीवनका अधिकांश क्रियाकलाप भर्चुअल संसारमा स्थानान्तरण गरे, जहाँ भाइरस पुग्न सक्दैनथ्यो ।
पक्कै पनि मानिस भौतिक प्राणी हो र सबै थोक डिजिटल बनाउन सम्भव छैन । मानव सभ्यता चलाउन यो कोभिड वर्षले कम ज्यालामा काम गर्ने नर्स, सफाइकर्मी, ट्रक चालक, क्यासियर, डेलिभरीकर्मीजस्ता पेसेवरहरूको महत्त्व प्रकाश पारेको छ । प्रत्येक सभ्यता बर्बरताबाट तीन माइल मात्रै पर पुगेको हुन्छ भन्ने गरिन्छ । सन् २०२० मा डेलिभरीकर्मीहरू सभ्यतालाई जोड्ने खतराको पातलो रेखामा थिए । उनीहरू हाम्रो भौतिक जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थिए ।
जब मानवता स्वचालित र डिजिटल भयो र हाम्रा कृयाकलाप अनलाइनबाट हुन थाले । यसले नयाँ खतरा बाहिर ल्यायो । यो कोभिड वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष इन्टरनेट सेवा रोकिएन । भौतिक पुलमा अचानक मानिसहरूको आवागमन बढ्यो भने ट्राफिक जाम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । पुल भाँचिन पनि सक्छ । सन् २०२० मा स्कुल, कार्यालय, चर्चहरू रातारात अनलाइनमा रुपान्तरण हुँदा पनि इन्टरनेटले धानिरहयो ।
हामीले यसबारे खासै ध्यान दिएनौँ । तर, ध्यान दिन आवश्यक छ । सन् २०२० पछि हामीलाई थाहा भएको छ, हाम्रो जीवन, अझ सम्पूर्ण देश भौतिक लकडाउनमा जान सक्छ । अब कल्पना गर्नुस्, डिजिटल पूर्वाधारहरू दुर्घटना भए भने के हुन्छ ?
सूचना प्रविधिले हामीलाई भौतिक भाइरसबाट सुरक्षित त बनाएको छ तर, यसले ‘मालवेर’ र साइबर युद्धको खतरा पनि निम्त्याइरहेको हुन्छ । मानिसहरू सोध्ने गर्छन्, ‘अर्को कोभिड के होला ?’ डिजिटल पूर्वाधारमा आक्रमण एउटा प्रमुख सम्भावना हो । कोरोना भाइरसलाई संसारभरि फैलिन र दसाैँ लाख मानिसलाई संक्रमित गर्न महिनौँ लागेको थियो । हाम्रा डिजिटल पूर्वाधार एकै दिनमा ध्वस्त हुन सक्छन् । जसरी तत्काल स्कुल र कार्यालयहरू द्रूत गतिमा अनलाइन भएका थिए, त्यसरी नै हामीलाई इमेलबाट परम्परागत हुलाक सेवामा फर्किन कति समय लाग्ला ?
कोभिड वर्षले हाम्रो वैज्ञािनक र प्राविधिक शक्तिकाे अझ महत्त्वपूर्ण सीमाहरू खुलासा गरिदिएको छ । विज्ञानले राजनीतिलाई विस्थापन गर्न सक्दैन । जब हामी नीतिबारे निर्णय गर्छौं, विभिन्न ‘इन्टरेस्ट’ र मान्यताहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । कुन ‘इन्टरेस्ट’ र मान्यता अरुभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक पद्धती हामीसँग छैन, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्क्यौल गर्ने वैज्ञानिक उपाय छैन ।
उदाहरणका लागि, जब लकडाउन गर्ने कि नगर्ने प्रश्न आउँछ, ‘लकडाउनले कति मानिसलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउँछ’ भन्ने सोधेर मात्रै पुग्दैन । ‘कति मानिस लकडाउनका कारण डिप्रेसनमा पर्छन्, कति मानिसले पोषणयुक्त खानाको अभावको सामना गर्नुपर्छ, कति विद्यार्थी स्कुल जान पाउँदैनन्, कतिले आफ्नो रोजगारी गुमाउँछन्, श्रीमान्-श्रीमतीबीचको झगडाका कारण कतिलाई चोट लाग्छ र कति मारिन्छन्’ भन्नेजस्ता प्रश्नकाे पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै तथ्याङ्क वास्तविक र विश्वसनीय छन् भने पनि ‘तथ्याङ्क कोबाट लिइयो ? के गणना गर्ने भन्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? यी संख्यालाई कसरी गणना गरिन्छ’ भन्ने सोध्नु पर्ने हुन्छ । यो वैज्ञानिकभन्दा पनि राजनीतिक काम हो । स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक विषयलाई सन्तुलन गर्ने र समग्र नीति बनाउने काम राजनीतिज्ञको हो ।
यसैगरी, लकडाउनमा हाम्रो कामलाई सहज बनाउन इन्जिनियरहरूले नयाँ-नयाँ प्लेटफर्म बनाइरहेका छन् । नयाँ निगरानीका साधनहरूले संक्रमणको शृङ्खला तोड्न सहयोग गरेका छन् । तर, ‘डिजिटलाइजेसन’ र निगरानीले हाम्रो गोपनीयतामा खतरा निम्याउँछ । यसले विगतका भन्दा अझ खतरनाक सर्वसत्तावादी शासनका लागि बाटो खोलिदिन्छ । सन् २०२० मा नागरिकको निगरानी अझ वैधानिक र सामान्य भएको छ । महामारी रोक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर, के यतिकै लागि हाम्रो स्वतन्त्रता लुटिनु जायज छ ? तानाशाही दुस्वप्नबाट बचाएर उपयोगी निगरानी प्रणाली बनाउने काम इन्जिनियरको नभएर राजनैतिक नेतृत्वको हो ।
तीन आधारभूत नियमले हामीलाई लामो समयसम्म ‘डिजिटल डिक्टेटरसिप’को खतराबाट बचाउन सक्छन् ।
पहिलो, जब मानिसहरूको व्यक्तिगत विवरण, खासगरी मानिसको शरीरभित्र के भइरहेको छ भन्ने विवरण संकलन गरिन्छ, यस्तो विवरण उनीहरूको सहयोग पुर्‍याउन मात्रै प्रयोग गरिनुपर्छ । तर, उनीहरूलाई प्रभावित पार्न, नियन्त्रण गर्न वा दु:ख दिन प्रयोग गरिनु हुँदैन ।
मेरो व्यकिगत चिकित्सकले मेरा अत्यन्तै निजी विषयबारे जानकारी राख्छ । यसमा मलाई समस्या छैन । किनभने, उनले ती जानकारी मेरो हितामा मात्रै प्रयोग गर्छन् भन्ने विश्वास गर्छु । मेरो चिकित्सकले यी जानकारी कुनै व्यापारिक निगम वा राजनीतिक दललाई दिनु हुँदैन । महामारीको बेला हाम्रो निगरानीको अधिकारप्राप्त निकाय भविष्यमा यस्तै हुनुपर्छ ।
दोस्रो, निगरानी सदैव दुईतर्फी हुनुपर्छ । निगरानी माथिबाट तलतिर मात्रै भयो भने त्यसले तानाशाहको लागि बाटो खोलिदिन्छ । त्यसैले जबजब नागरिकमाथि निगरानी बढाइन्छ, सरकार र व्यापारिक निगममाथिको नागरिक निगरानी पनि बढाइनु पर्छ।
उदाहरणका लागि, अहिले संकटका बेला सरकारहरूले ठूलो परिमाणमा पैसा बाँडिरहेका छन् । आर्थिक सहायता वितरणको प्रकृया अझ पारदर्शी बनाइनुपर्छ। एक नागरिकको रूपमा म सहजै क-कसले सरकारबाट के-के प्राप्त गरे र पैसा कसलाई दिने भन्ने निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने थाहा पाउन चाहन्छु । म यो पैसा साँच्चिकै संकटमा भएको व्यवसायलाई दिएको हो, मन्त्रीको निकट भएकै कारण कुनै ठूलो व्यापारिक निगमले पाएको होइन भन्नेमा विश्वस्त हुन चाहन्छु । सरकारले महामारीको बीचमा यस्तो प्रणाली बनाउन जटिल हुन्छ भन्छ भने त्यसलाई नपत्याउनुस् । तपाईं के-के गर्नुहुन्छ भन्ने निगरानी गर्न जटिल हुँदैन भने सरकारले के-के गर्छ भन्ने निगरानी गर्ने प्रणाली बनाउन पनि जटिल हुँदैन ।
तेस्रो, असाध्यै धेरै विवरण एकै ठाउँ जम्मा हुन नदिऊँ । महामारीको बेला मात्रै होइन, त्यसपछि पनि यसरी विवरण जम्मा हुन दिन हुँदैन ।
तथ्याङ्कमाथिको एकाधिकार तानाशाह जन्माउने उपाय हो । महामारी नियन्त्रणका लागि ‘बायोमेट्रिक’ विवरण संकलन गर्नुपर्छ भने त्यो प्रहरीबाट होइन, स्वतन्त्र स्वास्थ्य निकायबाट गरिनुपर्छ । यस्तो विवरण सरकारका अन्य मन्त्रालय र ठूला व्यापारिक निगमको पहुँचबाट अलग राखिनुपर्छ । यसले केही अतिरिक्त भार र अप्रभावकारिता निम्त्याउला । तर, अप्रभावकारिता एउटा विशेषता हो, दोष होइन । तपाईं ‘डिजिटिल डिक्टेटरसिप’ नउदाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने केही अप्रभावकारिता कायम रहन दिनुस् ।
सन् २०२० को अभूतपूर्व वैज्ञानिक र प्राविधिक सफलताले कोभिड-१९ संकट मोचन गर्न सकेन । उनीहरूले महामारीलाई प्राकृतिक विपदबाट राजनीतिक द्विविधामा रुपान्तरण गरिदिए । जब ‘ब्ल्याक डेथ’ले दसाैँ लाखको ज्यान लियो, मानिसहरूले राजा र सम्राटहरूबाट खासै अपेक्षा गरेका थिएनन् । ‘ब्ल्याक डेथ’को पहिलो लहरले इंगल्याण्डमा लगभग एक तिहाइ जनसंख्याको ज्यान गयाे तर, इङल्याण्डका राजा एडवार्ड तेस्रोले राजकाज गुमाउनु परेन । महामारी नियन्त्रण शासकहरूको शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा थियो । त्यसैले यो असफलताका लागि कसैले पनि उनलाई आरोपित गरेनन् ।
तर, आज मानवजातिसँग कोभिड-१९ को संक्रमण फैलनबाट रोक्ने वैज्ञानिक उपाय छ । भियतनामदेखि अस्ट्रेलियासम्मका मुलुकले बिना खोप वैज्ञानिक उपलब्धिको सहायतामा महामारीको संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । तर, यी वैज्ञानिक उपायको ठूलो आर्थिक र सामाजिक लागत हुन्छ । हामी भाइरसलाई पराजित गर्न सक्छौँ तर, त्यसको लागत व्यहोर्न हामी तयार छौँ, छैनौँ भन्नेमा हामी प्रष्ट छैनौँ । त्यसैले त वैज्ञानिक उपलब्धिहरूले राजनीतिज्ञहरूको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थमाएका छन् ।
दुर्भाग्यवश, धेरै राजनीतिज्ञ यो जिम्मेवारी बहन गर्न असफल भए । उदाहरणका लागि, अमेरिका र ब्राजिलका लोकप्रियतावादी राष्ट्रपतिले खतराको खेल खेले । उनीहरूले विशेषज्ञका कुरा सुन्नुको सट्टा षडयन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गरे । उनीहरूले स्पष्ट संघीय योजना अघि सारेनन् र महामारी नियन्त्रण गर्ने स्थानीय र प्रादेशिक प्रयासलाई पनि असफल पारिदिए । ट्रम्प र बोल्सोनारो प्रशासनको यो हेलचेक्र्याइँ र गैरजिम्मेवारीले रोक्न सकिने दसाैँ हजार मृत्यु निम्त्यायो ।
बेलायतमा कोभिड-१९ भन्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा ब्रेक्जिट थियो । आफ्नो पृथकतावादी सिद्धान्तका बावजुद जोनसन प्रशासन साँच्चिकै आवश्यक भाइरसको संक्रमणबाट मुलुकलाई पृथक राख्न असफल रह्यो ।
मेरो आफ्नै मुलुक इजरायल पनि राजनीतिक गलत व्यवस्थापनबाट पीडित छ । ताइवान, न्युजिल्याण्ड र साइप्रसजस्तै इजरायल पनि टापु देश हो, जसको सिमाना बन्द छ र मुलुक प्रवेश गर्ने एक मात्र द्वार बेन गुरियन एयरपोर्ट हो । महामारी उत्कर्षमा रहेको बेला नेतान्याहु सरकारले मानिसहरूलाई बिना क्वारेन्टाइन, अझ बिना जाँच, एयरपोर्टबाट आवतजावत गर्ने अनुमति दियो । र, आफैँले बनाएको लकडाउन नियमको पालना गराउनेमा हेलचेक्र्याइँ गर्‍याे ।
इजरायल र बेलायत दुवै भ्याक्सिन बनाउने दौडमा अगाडि देखिएका थिए तर, उनीहरूको गलत अनुमान निकै महँगो साबित भयो । बेलायतमा एक लाख २० हजार मानिसको ज्यान गयो, जुन देश अहिले कोभिड-१९ को औसत मृत्युदरको छैटौँ स्थानमा छ । यता, इजरायल संसारमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण दर रहेका मुलुकको सूचीमा सातौँ स्थानमा छ । यसले निम्त्याउने विध्वंस कम गर्न सरकारले अमेरिकी पिफाइजर कम्पनीसँग ‘तथ्या‌ङ्ककाे बदला खोप’ सम्झौता गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउन ठूलो मात्राको विवरणको बदलमा पिफाइजरले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । यसले गोपनियता र तथ्याङ्क एकाधिकारको प्रश्न सिर्जना गरेको छ । यसले नागरिकको विवरण राज्यका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमध्ये एक भएको देखाएको छ ।
केही मुलुकले राम्रो काम गरे पनि समग्रमा मानव जाति महामारी रोक्न असफल रह्याे । महामारी नियन्त्रण गर्ने वैश्विक योजना बनाउन असफल भयो । २०२० का सुरुका महिना दुर्घटनालाई सुस्त गतिमा हेरेझैं बित्यो । आधुनिक सञ्चारले पहिले वुहान र त्यसपछि इटालीमा के भइरहेको छ भन्ने तस्वीर त्यति बेलै हेर्न सम्भव भयो । त्यसपछि अरु देशमा संक्रमण फैलँदै गयो । तर, यो विध्वंस रोक्न वैश्विक नेतृत्व अगाडि आएन । हामीसँग उपायहरू थिए तर, राजनीतक इच्छाशक्तिको अभाव खट्किरह्यो ।
वैज्ञानिक सफलता र राजनीतिक असफलताबीचमा खाडल पैदा हुनुको एउटा कारण विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले सहकार्य गरे तर, राजनीतिज्ञहरू झगडामा अल्झिए । तनाव र अनिश्चयबीच वैज्ञानिकहरूले विश्वभरी सूचना आदानप्रदान गरे र एकअर्काले पत्ता लगाएका निष्कर्ष र सूक्ष्म जानकारीहरूमा विश्वास गरे । धेरै अनुसन्धान परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय समूहले काम गरेकाे थियो । उदाहरणका लागि, लकडाउनको प्रभावबारे बेलायतको एउटा, चीनका तीनवटा र अमेरिकाका पाँच गरी नौ अनुसन्धान संस्थाले संयुक्त रूपमा एउटा अध्ययन गरेका थिए ।
ठीक विपरीत, राजनीतिज्ञहरू भाइरसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्न र वैश्विक योजना निर्माण गर्न असफल भए । संसारका दुई प्रमुख महाशक्तिहरू अमेरिका र चीनले एकअर्कालाई महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाएको, गतल सूचना र षडयन्त्रको सिद्धान्त फैलाएको मात्रै होइन, नियतवश भाइरस फैलाएको आरोप लगाइरहे । धेरै देशहरूले महामारीको प्रसारसम्बन्धी तथ्याङ्क गलत रूपमा प्रवाह गर्ने वा लुकाउने काम गरे ।
वैश्विक सहकार्यको अभावले सूचनाको युद्ध मात्रै निम्त्याएन, अभावग्रस्त मेडिकल सामग्रीमाथिको द्वन्द्व पनि बढायो । केही सहकार्य र उदारता देखिए पनि उपलब्ध स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने, व्यापक रूपमा उत्पादन बढाउने र समतामूलक वितरण गर्नेतिर ठोस पहलकदमी लिइएन । अझ ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ले संसारमा नयाँ असमानतालाई जन्म दियो, आफ्ना नागरिकलाई खोप दिलाउन सक्ने मलुक र नसक्ने मुलुक ।
यो महामारीबारे एउटा साधारण सत्य पनि कतिपयले नबुझ्नु दु:खद् छ । जबसम्म विश्वको कुनै पनि कुनामा भाइरस फैलिरहन्छ, त्यति बेलासम्म कुनै पनि मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैन । मानौँ, इजरायल वा बेलायत आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र भाइरस निराकरण गर्न सफल भए तर, ब्राजिल वा भारत वा दक्षिण अफ्रिकाका करोडौँ मानिसमा भाइरस फैलिरहयो । ब्राजिलको कुनै कुनाबाट भाइरसको नयाँ ‘म्युटेसन’ फैलियो र अहिलेको भ्याक्सिन त्यसका लागि प्रभावकारी भएन भने फेरि विश्वभरी महामारीको नयाँ लहर फैलिन थाल्छ ।
वर्तमान संकटले माग गरेको आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई छोडेर परोकपकारितामा लाग्नु भन्ने होइन । वास्तवमा अहिलेको संकटमा वैश्विक सहकार्य भनेको परोपकार नै होइन । यो त राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अत्यावश्यक हो ।
सन् २०२० मा के भयो भन्ने विषयमा वर्षौंसम्म तर्कविर्तक भइरहने छ । तर, राजनीतिक शिविरमा भएका मानिसहरू कम्तीमा तीन प्रमुख पाठहरूमा सहमत हुन आवश्यक छ।
पहिलो, हामीले हाम्रा डिजिटल पूर्वाधारहरू सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ । महामारीको समयमा यो हाम्रा लागि मुक्ति बन्यो तर चाँडै यही कुरा योभन्दा ठूलो विध्वंसको स्रोत बन्न सक्छ ।
दोस्रो, सबै मुलुकले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्न जरुरी छ । यो कुरा प्रष्ट भएको छ तर कहिलेकाहीँ राजनीतिज्ञ र मतदाताहरू सबैभन्दा प्रमुख पाठलाई वेवास्ता गर्न सक्छन् ।
तेस्रो, महामारी रोकथाम र निगरानीका लागि हामी शक्तिशाली वैश्विक निकाय खडा गर्न सक्छौँ । जिवाणु र मानिसबीचको युगौँ पुरानो युद्धमा प्रत्येक मानिसको शरीर अग्रमोर्चामा हुन्छ । पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा यो रेखा पार हुन्छ, यसले सम्पूर्ण विश्वलाई खतरामा पार्छ । सबैभन्दा विकसित मुलुकका सबैभन्दा धनी मानिसलाई पनि संसारको सबैभन्दा गरिब मुलुकको गरिब मानिसको संरक्षण गर्ने विषयमा चासो हुनु जरुरी छ । कुनै जंगलछेउको गरिब गाउँबाट मानव शरीरमा नयाँ जिवाणु प्रवेश गर्‍याे भने त्यो जिवाणु केही दिनमै वालस्ट्रिट आइपुग्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र अरु विभिन्न संगठनका रूपमा यस्तो निकायको संरचना यसअघि नै बनिसकेको छ । तर, यो प्रणालीलाई आवश्यक बजेट असाध्यै थोरै छ । साथै, यसका लागि राजनीतिक सहयोग पनि छैन । यो प्रणालीलाई हामीले केही राजनीतिक शक्ति र अझ धेरै पैसा दिनु आवश्यक छ, जसले गर्दा यो प्रणाली केही आत्मकेन्द्रित नेताहरूको लहडमा निर्भर नहोस् ।
अघि भनेजस्तै, अनिर्वाचित विशेषज्ञहरूलाई महत्त्वपूर्ण नीति बनाउने जिम्मा दिन सकिँदैन । यो राजनीतिज्ञहरूको कार्यका रूपमा सुरक्षित रहनुपर्छ । तर, कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्र वैश्विक निकाय आवश्यक छ, जसले संसारभरिबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क एकट्ठा गर्ने, सम्भावित खतराको निगरानी गर्ने, संकेत गर्ने र अनुसन्धान तथा विकासका काम गर्न सकोस् ।
कतिपय मानिस कोभिड-१९ नयाँ महामारीहरूको सुरुवातको संकेत हो भनेर त्रसित छन् । तर, हामीले माथिका पाठहरू ठीकसँगले कार्यान्वयन गर्‍यौँ भने महामारीको क्रम धेरै कम हुने छ । मानवजातिले नयाँ जिवाणुको उदयलाई रोक्न सक्दैन । यो खर्बौं वर्षदेखि चलिरहेको प्रकृतिको उद्विकाससम्बन्धी नियमको उपज हो र भविष्यमा पनि जारी रहने छ । तर, आज मानवजातिसँग नयाँ जिवाणु महामारीको रूपमा फैलनबाट रोक्ने ज्ञान र साधन छ ।
कोभिड-१९ सन् २०२१ मा पनि फैलिइरह्यो, अझै दसाैँ लाख मानिसको ज्यान लियो भने, सन् २०३० मा नयाँ महामारीले मानवजातिलाई सतायो भने यो नियन्त्रण बाहिरको प्राकृतिक विपद वा ईश्वरले दिएको सजाय हुने छैन । यो मानवजातिको असफलता हुने छ । खासगरी, राजनीतिक असफलता ।
(इजरायली लेखक, इतिहासकार युभल नोह हरारीकाे फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित लेख । अनुवाद: रोहेज खतिवडा ।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १७, २०७७, ११:१९:००